Indlela yokwahlukanisa ubuhlungu be-bronchitis kusuka kwezinye "imishanguzo" futhi uyinqobe ngaphandle kokulinda izinkinga? Azikho izimpawu ezivame ukutholakala ezivumela ukuxilongwa kwe-bronchitis.
Ngomqondo wokuthi izimpawu zakudala ze-ARI, ezibonakalayo nezizwakalayo ngumuntu ongenalo imfundo ekhethekile, ungavumeli ukuba uqiniseke ukuthi lokhu kukhwehlela - ngokuqinisekile i-bronchitis. Ngesikhathi esifanayo nodokotela, ukuxilongwa kwe-bronchitis akubonisi ubunzima ngenxa yokuvuvukala kwe-bronchial ebonakalayo yempawu ejwayelekile yokuthola isisindo. Izimpawu ze-bronchitis enganeni, ukwelashwa kwakhe - konke lokhu ku-athikili.
Igama elithi "bronchitis" liyisitatimende sokuba khona ukuvuvukala kwe-bronchi, nokuvuvukala yi-microbial (i-viral, ibhaktheriya) ne-allergic. Okunye okunye okucacile okutholakala khona kwe-bronchitis ukuthi ukujula kwenqubo yokuvuvukala kuyahlukahluka. Isibonelo, inkulumo ingakwazi ukuhamba nge-tracheobronchitis, lapho kuphela i-trachea ne-bronchi enkulu kuphela ethintekayo, kodwa kungenzeka ukuthi isakaze inqubo yokuvuvukala ephansi-kuya kwe-bronchi ephakathi, i-bronchi encane. Izinga lomonakalo emthini obhubhisayo ngokuyinhloko ligcizelela kokubili izimpawu nokuqina kwesi sifo. Ukujula inqubo yokuvuvukala - indlela encane ehamba ngayo esiteshini sokuvuvukala. Ngakho-ke, amathuba okuvinjelwa aphezulu kakhulu, kunzima kakhulu ukukhwehlela i-phlegm, i-dyspnea ivame kakhulu.
Isici esiyinhloko se-bronchitis esibangelwa amagciwane noma amabhaktheriya kuyinkinga enkulu ye-syndrome yezifo ezivamile. Futhi leli qiniso elicacile lisho incazelo enengqondo ngokuphelele. Cabanga ngamagciwane amabili. Omunye uyakwazi ukuphindaphindeka embranini ye-mucous ekhaleni, okwesibili - embranchi emangcwabeni ye-bronchi. Esikhathini sokuqala, izinga lezindiza ezitholakala egazini liyizicenti eziningana (kungakanani ukuthi kukhona impumulo!). Esikhathini sesibili - amamitha ambalwa wesihlahla sama-bronchial. Akumangazi ukuthi nge-bronchitis, uma kuqhathaniswa ne-rhinitis, kunezicubu eziningi ezonakalisiwe izikhathi eziningi, izinhlayiya eziningi ezithinteka egazini, njalonjalo. Ngakho-ke akuyona imithetho eminingi njengendlela evamile yokuqonda ukuthi i-syndrome yezifo ezijwayelekile esiqhingini sezansi zokuphefumula ziyaziwa kakhulu kunokunqotshwa kwendlela yokuphefumula engenhla. Futhi omunye umthetho owodwa: kuyinto engavamile kakhulu ukuthi le microbe efanayo ngesikhathi esifanayo kubangele inqubo yokuvuvukala okukhulu kokubili bronchi kanye nekhala. Ngakho-ke, ukukhwehlela njalo ngephunga elincane elimnandi kungenzeka ukuthi liwu-bronchitis, kodwa uma i-snot isakaza, i-bronchitis ayinakwenzeka.
Njengoba saqala ukukhuluma ngokukhwehlela, siyaqaphela ngokushesha, ngokuqondile, siphindaphinda, ukuthi akekho ukukhwehlela kwe-bronchitis ethize. Izimpawu zokukhwehlela zihluka ngokuvuvukala kwe-bronchi njalo. Ekuqaleni kokugula, ukukhwehlela, njengokubusa, kuvamile, kuyomile, kuyifushane, kubuhlungu, hhayi ukuletha impumuzo. Njengoba ephulukisa, uba ngumswakama futhi uphumelele.
(Hhayi) ukuphefumula okulula
Kunezinqubo ezintathu ezibangela ukuphefumula okusebenzayo ohlelweni lokuvuvukala endleleni yokuphefumula: i-edema, i-spasm, i-hypersecretion. Futhi i-edema ye-mucosa ye-bronchial, ne-spasm ye-muscle bronchial, kanye nokugxila kwe-sputum yizigulane ze-mucosa ye-bronchial - konke lokhu (ngezinga elilinganayo lobunzima) njalo kuyenzeka nge-bronchitis. Akumangalisi ukuthi ukuphefumula nokuphefumula kanzima yizimpawu ezivamile zokuvuvukala kwe-bronchi enezici zayo ezithile. Isici esibalulekile sokuphefumula nge-bronchitis - uma kunzima, kunzima ukuthi ungafaki (njenge-croup), okuyi-exhale. Ukuphefumula okunzima kuyisibonakaliso se-bronchitis kuphela, kuyindlela evamile kunoma iyiphi inqubo yokuvuvukala emkhakheni ophansi wokuphefumula. Lapha, ngokuyisisekelo, kunengqondo futhi ukukhumbula futhi ezincwadini ezinesibindi ubhale umthetho obalulekile wokuxilonga:
♦ umoya ovimbekile - uphawu olujwayelekile lomonakalo omkhulu wokuphefumula;
♦ Ukuphefumula kungumuthi ojwayelekile wokutheleleka kokuphefumula okuphansi.
Kusobala ukuthi inqubo yokuvuvukala ingathinta kokubili ukuphefumula okuphezulu nangaphezulu. Kusobala ukuthi ukuvinjelwa kwemikhumbi yezindiza kungafinyeleleka ngokweqile lapho kuyoba nzima ukuphefumula nokuphuma. Futhi-ke ukuphefumula kokuphefumula kuzoxubaniswa. Kodwa lokhu akuyona ukuphikisana komthetho onikeziwe, kodwa kuphela umfanekiso wayo. Ukuphefumula okunzima ku-bronchitis kubonakala, okokuqala, ngokwandiswa kokukhipha umoya. Esinye isici esibalulekile ukubonakala ngesikhathi sokuphuma komsindo omsindo, okuyinto uphawu oluthile lwe-bronchospasm spasm.
I-bronchospasm yisimpawu esivamile kakhulu se-bronchitis, ikakhulukazi isici se-bronchitis yokugula. Ngenxa yokubaluleka, masibuye siphinde sibuyele: i-elongated, i-wheyzing exhaust is uphawu olujwayelekile lokuxilongwa kwe-bronchospasm. Ukuqoqwa kwe-mucus e-bronchial ku-lumen ye-bronchi kuholela ekubuyeni kokuphefumula, ukukhwehlela njalo, ukukhiqiza okuvela kuzo zonke izindawo ze-sputum, u-sputum obukhulu futhi obunzima kakhulu - ukukhwehlela okungakhiqizi, uketshezi olunomkhuhlane-ukhiqiza ukukhwehlela, okuletha ukukhululeka. Isibonakaliso esivamile kakhulu se-bronchitis - izici zokuphefumula ziguquke kakhulu emva kweziqephu zokukhwehlela: ziphefumula kakhulu, zikhukhumezekile, i-sputum yahamba, yaba izikhathi eziningi lula.
Izimpawu ezicacile "izimpawu ezinzima" - ukuphefumula, i-sputum ngenxa yokuxubana, i-wheezing, i-bronchospasm - kulula kakhulu ukuyihlaziya ngesikhathi sokuhlaziya. Isibonakaliso esibaluleke kunazo zonke sokuvuvukala kabuhlungu ukuphefumula kanzima.Ukuqina kwalesi sibonakaliso akukwazi nje ukuphendula lo mbuzo: ingabe i-bronchitis noma cha, kodwa futhi ukuhlola ukuqina kwenqubo yokuvuvukala, ukuphakama nokuvama kokuphefumula, isilinganiso sokuphefumulelwa nokuphelelwa yisikhathi, izinhlobonhlobo zemigqa eyomile neyemanzi, izintuthuko zombuso emva kokukhwehlela, ukutholakala noma ukungabi khona kwe-br nhospazma - lezi zimpawu auscultatory sobala futhi ezingabizi uvumela uhlelo udokotela abanolwazi ukuphendula imibuzo eminingi:
♦ Yiba ne-bronchitis noma cha;
♦ Yiba ne-bronchospasm noma cha;
♦ kungakanani u-sputum, ukuthi uyini, lapho ekhona;
♦ kanjani ukuthi i-edema, i-spasm, i-hypersecretion, ihlelwe kanjani, ngenxa yezinto ezimbi kuleli cala elithile, yini okufanele iqedwe futhi. ngokufanele, yiziphi amalungiselelo okufanele asetshenziswe kuqala - ukunciphisa i-edema, ukuqeda ukugxila noma ukusiza ukuhamba kwe-phlegm;
♦ Ngabe yiliphi izinga le-bronchi elichaphazelekayo: i-bronchi enkulu, ephakathi, encane noma konke:
♦ Ziyini ukubonakaliswa kwe-bronchitis emaphashini angakwesokunxele nangakwesobunxele: konke okulingana okulinganayo, ukuvuvukala kwesokudla kujulile, kune-sputum engakwesokunxele, i-bronchospasm engaphezulu, nokunye okunjalo ngakwesokudla. Ngokuqondene nephuzu lokugcina, kufanele kuqashelwe ukuthi i-bronchitis e-ARI cishe ihlala ephakathi kwamanye amazwe, ngoba akunakwenzeka ukucabanga ngesimo lapho igciwane, ibhethri noma i-allergen lizofika khona emaphashini alungile, kodwa ushiye ngakwesobunxele ongatholakalanga.
Ezingxenyeni eziningi kakhulu, lapho udokotela ebiza igama elithi "bronchitis", futhi ingane, ngokulandelana, igula nge-bronchitis, umbuzo we-bronchitis yegciwane. I-share of bronchitis ye-viral account okungenani engu-99% yonke (!) IBronchitis. Futhi kuyaqondakala futhi kunengqondo ngempela ukuthi iqiniso lokuthi i-bronchitis yegciwane ivame ukuvela emuva kwe-ARVI. Cishe ukuhluka okuyingozi kakhulu kwe-ARI ku-bronchitis jikelele kanye ne-viral ikakhulukazi isimo lapho igciwane elilodwa elibangela kokubili uketshezi kanye ne-bronchitis kanyekanye. Lesi simo sibizwa nge-stenosing laryngotraheobronchitis. Uhlu lwamagciwane angabangela i-bronchitis alinganiselwe kumagciwane okuphefumula. I-allergenic bronchitis iqala ngokuzumayo, emva kokuxhumana nomthombo othize wokungezwani komzimba, kodwa kungaba ukubonakaliswa kwesifo sokuzimela esithile esizimele nesiqondile - isifo sokuphefumula. I-bronchitis enjalo, ehambisana nokuphulwa kwe-paton ye-bronchi, okuyinto ephikisayo emvelweni, kwenzeka ngokumelene nesizinda se-asthma e-bronchial futhi ngokuvamile ihambisana ne-bronchospasm.
Izifo zesikhumba ezinganeni
Indlela yokuhlanza kahle izindlebe zengane
Ingabe ukukhula kwengane kuxhomeke kubazali?
Indlela yokwenza ingane ikwazi ukucindezela
Izwi lomalusi: Indlela yokugcina kahle iLente Elikhulu
Izitshalo ezingaphandle: i-allamanda
Iziphi izicathulo ezifashisayo kule nkathi yabasha
Izindlela zokwelashwa kwe-nail ingil
Amaqebelengwane amabili e-chocolate
Izinwele zezinsikazi ezinhle zonyaka omusha we-2016 ngezinwele ezimfushane, isithombe
Indlela yokubhekana ngokuphumelelayo nezinwele ezimpunga
Ukubamba ngokujwayelekile noma ukuboshwa okuphefumulayo ephusheni?
I-Horoscope yezempilo ngoFebhuwari 2014